Die mgbatị mkpuchi - Dongguan Yiwei nkenke hardware Products Co. LTD
1. Gịnị bụ anwụ mgbatị mkpuchi?
Azịza: N'oge anwụ-mgbatị mmepụta usoro, ịgba lubrication usoro ihe na thinners na uji eze mgbidi, isi elu, ebu na-anwụ-ningfe igwe esemokwu akụkụ (dị ka sliders, ejector ọcha, punches na ọgwụ ụlọ) The ngwakọta a na-amarakarị dị ka mba m anwụ-igba metal mkpuchi.
2. Kedu ihe bụ ọrụ nke mkpuchi nkedo anwụ?
Azịza: (1) Nọgide na-arụ ọrụ mmanu dị mma na oke okpomọkụ;
(2) Iji zere mmetụta mbuze nke nnukwu okpomọkụ na-agbaze alloy n’elu oghere, gbochie ihe omuma nke ebu na-arapara, ma melite ọnọdụ ọrụ nke ihe nlereanya ahụ;
(3) Mee ka ọdịdị nke alloy dịkwuo mma site na mbenata arụmọrụ nke ihe nlereanya ahụ na ịnọgide na-agbanwe mmiri nke ihe a wụrụ awụ
(4) Belata esemokwu n'etiti nkedo na ebu na-akpụ teknụzụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ, si otú a na-ebelata uwe nke isi na oghere, na-agbatị ndụ ọrụ nke ebu ahụ ma melite ogo nke mgbatị ahụ.
3. Kedu ihe anyị chọrọ maka mkpuchi nkedo anwụ?
Azịza: (1) Ọnọdụ ntụgharị dị ala, ike dilution na-agbanwe ngwa ngwa na 100 ~ 150â „ƒ.
(2) Ezi mkpuchi;
(3) Ọ dịghị corrosive mmetụta na nlereanya na nkedo;
(4) Ezi mmanu;
(5) Ọrụ kwụsiri ike;
(6) Anaghị esi isi pụrụ iche, enweghị gas ga-emebi ma ọ bụ ree ere na oke okpomọkụ;
(7) Usoro nhazi dị mfe;
(8) Onu ogugu na onu ahia di ala.
4. Kedu ihe mkpuchi aluminium nke a na - ejikarị eme ihe?
Azịza: (1) Graphite + mmanụ mmanụ, eji maka mmepe akpụ akpụ teknụzụ, jiri ọkpọ ọkpọ ọkpọ na ọtụtụ ụlọ ọgwụ;
(2) Mmanụ + bitumen, ihe ruru ya bụ 85/15, a na-ewe bitumen ahụ ọkụ ruo 80â „then wee gbazee, a gwakọtara mmanụ ahụ nke ọma, nke nwere ike igbochi ebu ebu.